Date: November 11, 2018Author: Rahul0Comments
Ribbon Cutting Ceremony of KM Terminal (Photo: New Image)
KM Terminal & Logistics Limited implemented the dry port projects under the Build, Operate and Transfer (BOT) system.
“With more than 20 years of cargo handling experience from the management team, the two dry ports facilities will improve the movement of imports and exports, moving the time-consuming sorting, away from the congestion of Yangon traffic and low down the logistics cost by using modern machinery and computer control system. Also, worry-free with insurance coverage by using rail from port to dry ports,” U Nyi Htut added.
Ywar Thar Gyi Dry Port and Myit Nge Dry Port, which strategically located in the center of Myanmar will support trading between lower and upper Myanmar and eventually open up trading toward neighbouring countries.
2) The ability to transport safely and economically by road and railway with time schedules.
3) An onsite one-stop logistics solutions that allow customers to customize their cargo handling needs to world-class standard including on-site customs inspections, fumigation, quality inspection and bonded warehouse.
Group Media interview session (Photo: New Image)
ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက် ရန်ကုန်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းကို တရားဝင်ဖွင့်လှစ်
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်၊ ၂၀၁၈ခုနှစ် – ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆိပ်ကမ်းများနှင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်းများအတွက် ယာဉ်ကြော သွားလာရေး ပိတ်ဆို့မှု လျှော့ချပြီး ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ကုန်ကျစရိတ် လျှော့ချနိုင်ရန် ရည်ရွယ် သောကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းဖြစ်သည့် Yangon Dry Port ကို ရွာသာကြီးတွင် ယနေ့ တရားဝင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
ဤကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်းများကို ဆောက်လုပ်၊စီမံ၊ လွှဲပြောင်းစနစ် (Build, Operate and Transfer, BOT) system) ဖြင့် KM Terminal & Logistics Limited မှ စတင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“ဒီနေ့ ရန်ကုန်မှာ ရွာသာကြီး ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကို ကြေညာနိုင်တဲ့အတွက် အင်မတန်ဂုဏ်ယူ မိပါတယ်။ ဒီကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းက ၂၀၁၈ မေလလောက်ကတည်းက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် နေတဲ့ မန္တလေးက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မြစ်ငယ်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းနဲ့ အခုဆို ချိတ်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု KM Terminal and Logistics Limited ၏ အထွေထွေ မန်နေဂျာဖြစ်သူ ဦးညီထွဋ်မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ရန်ကုန်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းသည် ရေယာဉ်များအကြား ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုကို မြန်ဆန်စေကာ ကုန်းတွင်းအဓိက သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကွန်ယက်များကိုလည်း ပိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ကုန်စည်လက်ခံသူများနှင့် တင်ပို့သူများ အတွက်လည်း တန်ဖိုးအသစ်များ ဖန်တီးပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဆိပ်ကမ်းတွင် အကောက်ခွန်စစ်ဆေးမှုများလည်း ထားရှိထားပြီး ၂၄ နာရီ ၇ရက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ကွန်တိန်နာ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုများ၊ IT ချိတ်ဆက်စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်း အလေးချိန်စက်၊ ကုန်ပစ္စည်းအာမခံနှင့် ပြန်လည်တင်ပို့မည့် ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် သွင်းကုန်-ပြည်ပပို့ကုန် အခွန်လွတ်ကင်းခွင့် စသည်ဝန်ဆောင်မှုများ ပါရှိသွား မည်ဖြစ်သည်။
“စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် ကုန်ပစ္စည်းကိုင်တွယ်စီမံရေး အတွေ့အကြုံတွေနဲ့အတူ ဒီကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း နှစ်ခုက သွင်းကုန်၊ ပို့ကုန်တွေရဲ့ လည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို အဆင့်မြင့်စေပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့တာကနေ ဝေးတော့ အချိန်ကုန်သက်သာတယ်။ နောက်ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကွန်ပျုတာထိန်းချုပ် စနစ်ကို သုံးထားတဲ့အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေး မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆိပ်ကမ်းကနေ ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းတွေကို ရထားသံလမ်းကို သုံးထားတဲ့အတွက် အာမခံတွေရှိလို့ စိတ်ပူစရာလည်း မလိုဘူးပေါ့” ဟုဦးညီထွဋ်မှ ဆက်လက်ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ရွာသားကြီး ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ဗဟိုတွင် နည်းဗျူဟာကျစွာ တည်ဆောက်ထားသော မြစ်ငယ် ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း နှစ်ခုသည် မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းနှင့် အထက်ပိုင်း အကြား ကုန်သွယ်ရေးကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးပြီး နောက်ဆုံးတွင် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများအထိပါ ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ဖွင့်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
“နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက် ရွာသာကြီးနှင့် မြစ်ငယ်ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများ၏ အရေးပါဝင်ပုံ၊ ရန်ကုန်- မန္တလေးစီးပွားရေး စင်္ကြံလမ်း တစ်လျှောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ထိရောက်မှုရှိစွာ အဓိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အရေး ကြီးပုံကို ကောင်းစွာ သိရှိနားလည်ထားပြီး အောက်ဖော်ပြပါ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် အသစ်ကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲပြင်ဆင် သွားမည်ဖြစ်သည်။
၁။ နိုင်ငံအတွင်း တင်သွင်း/တင်ပို့ခြင်း အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချရန် အတွက် သော်လည်းကောင်း ကုန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်၊ ကုန်တင်ကုန်ချ ဆောင်ရွက်ရန် ပစ္စည်းကိရိယာ ပြည့်စုံမှု။
၂။ ကားနှင့်ဖြစ်စေ၊ ရထားနှင့်ဖြစ်စေ အချိန်မီ အစီအစဉ်အလိုက် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနှင့် စီးပွားဖြစ် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
၃။ Customer များအား ၎င်းတို့၏ ကုန်ပစ္စည်း ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များကို ဆိပ်ကမ်း အကောက်ခွန် စစ်ဆေးခြင်း၊ ပိုးမွှားရှင်းလင်းခြင်း၊ အရည်အသွေး စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကုန်သိုလှောင်ရုံ အစရှိသည့် ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီ အဆင့်အတန်း အတိုင်း လိုအပ်သည့်အလျောက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် one-stop သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး ဖြေရှင်းချက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
၄။ Door-to-door ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို မူလနေရာများနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ သတ်မှတ် နေရာများအထိ ပို့ဆောင်နိုင်ရန်။
၅။ ကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်းများကို ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ စီးပွားရေးမိတ်ဖက်များ အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သော ကုန်းတွင်း ကွန်တိန်နာ ကုန်လှောင်ရုံများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် နာမည်ကျော် သင်္ဘောလိုင်းများနှင့် လက်တွဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်။” စသည်တို့ဖြစ်သည်။
KM Terminal LogisticsLycaLyca CommunicationsLyca Company LimitedMyanmarMyanmar PR AgencyPRPress ReleasePublic RelationsTeam LycaYangonYangon Dry Port